यी ६ जागिरहरु: जहाँ काम गर्ने मानिस निर्वस्त्र हुनुपर्छ – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ पुष २८, सोमबार १०:३३
दुनियाँमा अनेक प्रकारका जागिर तथा व्यवसाय छन् । कतिपय जागिर यस्ता पनि छन् जुन सुन्दैमा रोचक तथा अनौठा लाग्दछन् । त्यसैले त्यस्ता जागिर गर्ने हिम्मत पनि लरतरो मानिसले गर्दैन होला । यस्तै मध्येको एक जागिर छ, जहाँ काम गर्ने मानिसले जिउमा लुगा लगाउन पाउँदैन ।
नांगै हुनुपर्ने केही जागिर यी हुन्ः
१. न्यूड गार्डेनिङ्गः अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा युरोपका केही देशमा नांगै भएर बगैँचामा काम गर्ने पुरुष जागिरेहरु हुन्छन् । यो अनौठो खालको काम हो । जहाँ पुरुषहरु कामका दौरान जिउमा कपडा लगाउँदैनन् ।
४. न्यूड योगा स्टुडियोः बेलायतको चेल्सीस्थित न्यूड योगा स्टुडियोमा निर्वस्त्र योगा कक्षा सञ्चालन हुनछ । त्यहाँ काम गर्ने योगगुरु हरु पनि निर्वस्त्र हुन्छन् । गुरुहरु निर्वस्त्र हुने भएपछि योगा सिक्न आउनेहरुले कपडा लगाउने कुरै भएन।
५.न्यूड सफ्टवेयर कम्पनीः बेलायतको बकिंघमशायरमा रहेको एक कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्ने महिलाहरु कार्यालय अवधिभर निर्वस्त्र रहन्छन् । महिला कोडर्सहरुलाई कार्यकक्षमा न्यूड बस्नु अनिवार्य छ ।